तपाइले ,सधै बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ नतिजा ! – Online Nepal Site
अभिनेत्री सिल्पाको एक बर्षकी छोरीलाई पनि कोरोना लागेपछि, भावुक हुँदै सम्झिन भगवान
यी ४ कुरालाई ध्यान दिए ८० प्रतिशत रोगनै लाग्दैन’ – डा. भगवान कोइराला (भिडियो सहित)
कोरोना संक्रमणबाट एकै दिनमा १३९ जनाको मृ’त्यु
मुख्य पृष्ठ /Health/तपाइले ,सधै बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ नतिजा !
काठमाडौँ । यदी तपाई स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउन सुरु गर्नुहोस्। यसले तपाईको ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, उर्जामा सुधार, मोटोपन जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याबाट छुटकारा दिने गर्दछ। बिरे नुनमा ८० प्रतिशत खनिज र जीवनका लागि चाहिने सबै आवश्यक प्राकृतिक तत्व पाइने गर्दछ।
पानी बनाउने विधि
एक गिलास हल्का तातो पानीमा एक तिहाई बिरे नुन मिलाउनुहोस्। त्यसपछि यसलाई प्लास्टिकको ढंक्कनले ढाकिदिनुहोस्। त्यसपछि गिलासको नुन घोल्नका लागि ३४ घण्टाका लागि छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि बिरेनुनको टुक्रा पानीमा घोलियो की खोलिएन हेर्नुहोस्। त्यसपछि पनि फेरि बिरे नुन थोरै मिलाएर त्यो पानी पिउनुहोस्।
बिरे नुनको पानीले मुखमा आएको लारवाला ग्रन्थिलाई सक्रिय रहन मद्दत गर्दछ। राम्रो पाचनका लागि यो पहिलो कदम निकै जरुरी हुन्छ। पेटभित्र प्राकृतिक नुन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड र प्रोटीन पचाउने इंजाइमलाई उत्तेजित गर्नमा सहयोग गर्दछ। यसले खाएको खानालाई आरामले पचाउन सहयोग गर्दछ।
कालो नुनले तौल घटाउन पनि मद्धत गर्छ । शरीरमा पाचन प्रक्रिया ठीक हुन्छ भने खानामा भएको पोषक तत्व शरीरले राम्ररी लिन पाउछ । स्वादिलो हुने भएकाले यो नुन निरन्तर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।त्यसका लागि एक गिलास पानीमा एउटा कागती निचोरेर हाल्ने र स्वाद अनुसारको नुन मिसाउन सकिन्छ । गर्मीका बेला तिर्खा लाग्दा दिनको तीन चारपटक बिरे नुन खान सकिन्छ ।
बिरे नुनमा सोडियम कम हुन्छ । यसले ब्लड सुगरलाई नियन्त्रित गर्छ । यसैले मधुमेहका बिरामीका लागि कालो नुन उपयोगी हुन्छ । मधुमेह सुरुवाती अवस्थामा छ भने त बिरे नुनको प्रयोगले ठीक पनि हुन सक्छ ।
जोर्नी तथा मांसपेशी दुख्दा
मांसपेशी र जोर्नी दुख्दा बीरे नुनले सेक्ने हो भने निको हुन्छ । कपडामा थोरै नुन बाँधेर यसलाई तातो बनाएर दुखेको ठाउँमा दिनको दुईपटक सेक्ने हो भने तत्काल राहत मिल्छ ।
त्वचाको समस्या हटाउछ
बिरे नुनमा पाइने क्रिमियमले सफा र कोमल त्वचा बनाउन सहयोग गर्दछ। यस बारेक बिरे नुनको पानी पिउदा छालाका विभिन्न समस्या हट्ने गर्दछन्।
कोरोना संक्रमणलाई लिएर नेपालका लागि आयो यस्तो डरलाग्दो खबर
अमलाको जुसले निको पार्छ यी रोगहरु- जानकारी सहित (भिडियो हेर्नुहोस्)